Visme: Aalad Awood u leh Abuurista Muuqaal Muuqaal Cajiib ah | Martech Zone
Waxaan wada maqalnay in sawirku u qalmo kun eray. Tani ma noqon karto mid runta maanta ah maadaama aan markhaati ka nahay mid ka mid ah kacdoonnadii ugu xiisaha badnaa ee isgaarsiinta ee xilliyada oo dhan – mid sawirradu sii wadaan inay beddelaan erayada. Qofka celceliska ahi wuxuu xusuustaa keliya 20% waxa uu akhriyey laakiin 80% waxa uu arko. 90% macluumaadka loo gudbiyo maskaxdeena waa muuqaal. Taasi waa sababta nuxurka muuqaalka ahi u noqday habka keliya ee ugu muhiimsan ee lagu wada xidhiidho, gaar ahaan adduunyada ganacsi ee maanta jirta.
Ka fikir kaliya hal ilbiriqsi oo ku saabsan sida caadooyinka isgaarsiintayada ay isu beddeleen tobankii sano ee la soo dhaafay:
Mar dambe ma dhihi karno wax baa nala yaabay; waxaan si fudud ugu dirnaa emoji ama GIF jilaaga aan jecel nahay. Tusaale: qosolka Natalie Portman ayaa garaacday "lol" caadiga ah.
Mar dambe ma qori doonno inaan ku jirno safarka noloshaada oo aan la jirno shirkad weyn; waxaan qaadanaa sawir iska qaadis ah:
Mar dambe kuma arki doonno cusbooneysiin, qoraal ku saleysan xaalad cusboonaysiin ah barahayada Facebook iyo Twitter; waxaan aragnaa fiidiyowyo - xitaa sii noolaadaan - lagu qaaday aaladaha moobaylka:
Intii aan ku guda jirnay isbeddelkan dhaqan ee aan ku dhex nool nahay - kaas oo nuxurka muuqaalka ahi uu noqday boqorka cusub ee adduunka khadka tooska ah – miyaanay fiicnaan lahayn in la helo muuqaal muuqaal ah oo multitool ah oo qaban kara dhammaan shaqada adag ee abuurista muuqaal soo jiidasho leh ma noo tahay?
Marka maxaa la gudboon? Ma kiraysaa naqshadeeye qaali ah ama saacado badan iskuday inaad barato sida loo isticmaalo softiweerka naqshadeynta adag? Tani waa halka Visme ay ku timaaddo sawirka.
Qalab abuur muuqaal ah oo dhan-ka-mid ah, Visme waxay ku habboon tahay suuqleyda, ganacsatada, baloog-qorayaasha, iyo kuwa aan faa'iido doonka ahayn ee doonaya inay abuuraan dhammaan noocyada muuqaalka ee ololahooda suuq-geynta iyo agab waxbarasho.
Aynu eegno waxa ay qabato iyo sida ay uga caawin karto ganacsigaaga:
Soo bandhigitaannada iyo sawir-gacmeedka ayaa si fudud loo sameeyey
Marka la soo koobo, Visme waa aalad si fudud loo isticmaali karo, jiid-iyo-dhibic ah oo kaa caawin karta inaad ku abuurto bandhigyo layaableh iyo sawir-qaadis daqiiqado gudahood ah.
Haddii aad ku daashay adeegsiga isla bandhigyadii hore ee PowerPoint, Visme waxay bixisaa qaabab qurxoon, oo qeexitaan sare leh, mid walbana wuxuu leeyahay uruurin u gaar ah oo ku saabsan qaababka isdabajoogga ah.
Ama, haddii aad rabto inaad sameysid muuqaal muuqaal ah oo wax ku ool ah, isbarbardhig wax soo saar ah ama warbixintaada macluumaadka gaarka ah ama dib u bilawga, waxaa jira daraasiin farsamo-yaqaanno qaabeysan oo la kala doorto si looga bilaabo lugta midig.
Kuxiran kumanaan astaamo bilaash ah iyo agab garaaf ah, iyo sidoo kale malaayiin sawirro bilaash ah iyo boqolaal font, Visme wuxuu ku siinayaa wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u bilowdo sameynta mashruuc aragti kuu soo jiidan kara – wax aad ku faani doonto inaad la wadaagto shabakadahaaga bulshada iyo booqdayaasha goobta.
Habee wax kasta
Mid ka mid ah quruxda la shaqeysa Visme waa awoodda ay siiso dadka isticmaala si ay u abuuraan sawir kasta oo dijitaal ah oo maskaxda ku haya aagga naqshadeynta caadada ah.
Iyadoo la adeegsanayo ikhtiyaarka cabbirka caadada ah, isticmaaleyaashu waxay abuuri karaan wax kasta, oo ka imanaya xusuustaas la wadaagi karo ee lagu arkay warbaahinta bulshada illaa waraaqaha, boorarka iyo boodhadhka ama waxyaabo kale oo xayeysiin ah.
Ku dar animation iyo is-dhexgal
Muuqaal kale oo ka dhigaya Visme mid ka duwan inta kale waa awooddiisa ah inuu ku daro animation ama ka dhigo wax kasta oo is-dhexgal ah, sida hoos ku muuqata mid ka mid ah mashaariicda macmiilkayaga. Haddii aad rabto inaad ku darto fiidiyoow, foom, sahan ama kedis ku jira muuqaalkaaga muuqaalka ah, Visme waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku dhajiso gabi ahaanba shey kasta oo lagu abuuray qalab dhinac saddexaad ah.
Intaa waxaa sii dheer, waxaad abuuri kartaa badhankaaga wicitaan-ka-ficil, sida hoos ka muuqata, si aad ugu martiso martida bogga degitaanka ama foomka jiilka hoggaaminta.
Daabac oo wadaag
Ugu dambeyntiina, maadaama Visme ay ku saleysan tahay daruur, waxaad ku daabici kartaa mashruucaaga qaabab kala duwan oo aad la wadaagi kartaa meel kasta. Waxaad u soo degsan kartaa mashruucaaga sawir ahaan ama feyl PDF ah; ama haddii aad doorbido, waxaad ku dhex geli kartaa boggaaga ama bartaada internetka; ku daabac khadka tooska ah si aad uga heli karto meel kasta; ama u soo dejiso HTML5 si aad u soo bandhigto khadka tooska ah (xaaladaha aad kuxirantahay isku xirnaanta ama aan lahayn Wi-Fi gabi ahaanba).
Asturnaanta iyo Falanqaynta
Waxa kale oo jira ikhtiyaarka ah inaad ku ilaaliso mashaariicdaada mid gaar ah adoo kicinaya ikhtiyaarka Helitaanka Xaddidan ama ereyga sirta ah ee iyaga ilaalinaya.
Faa'iido kale oo weyn: Waxaad marin u heleysaa tirakoobyada isku dhafan ee aragtiyaha iyo booqashooyinka boggaaga macluumaadka hal meel ah. Tani waxay ku siin doontaa aragti aad u sax ah oo ku saabsan heerarka kaqeybgalka, gaar ahaan markay booqdayaashu go'aansadaan inay ku dhejiyaan macluumaadkaaga bogaggooda.
Wada shaqeyn kooxeed
Iyadoo in ka badan 250,000 oo isticmaaleyaal ah, in badan oo ka mid ah shirkado waaweyn sida Capital One iyo Disney, Visme ayaa dhowaan soo bandhigtay qorshaheeda kooxeed si ay uga caawiso dadka isticmaala inay iskaashi kala yeeshaan mashaariicda si wax ku ool ah, gudaha iyo dibaddaba ururadooda.
Qaybta ugu wanaagsan dhammaantood waa in Visme ay u tahay bilaash qof kasta oo doonaya inuu bilaabo abuurista muuqaal muuqaal leh qalabka naqshadeynta aasaasiga ah. Kuwa doonaya inay furfuraan sheybaarada caymiska isla markaana marin u helaan astaamo horumarsan, sida qalabka iskaashiga iyo Analytics, Qorshayaasha la bixiyay waxay ka bilaabmaan $ 15 bishiiba.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Kooxaha Visme Saxiix U Saxeex Koontadaada Visme ee Bilaashka ah
Shaacinta: Waxaan ahay a Lamaanaha Visme oo waxaan isticmaalayaa iskuxiraha lamaanahayga ee maqaalkan.
Tags: buttonwac talaaboabuurka shaxdaaaladda shaxdactaqalab infographicqalab instagramqalab soo bandhigidfiiritusmada muuqaalkamadal muuqaal muuqaal ahnuxurka webka
Nayomi Chibana waa saxafi iyo qoraa VismeXarunta Wax Barashada Muuqaalka. Waxay MA ka heshay Saxaafadda iyo Saxaafadda Jaamacadda Hamburg ee Jarmalka waxayna tifaftire ka ahayd majallad hoggaamineed oo baaritaanka siyaasadda Latin America muddo dhowr sano ah. Ka sokow sameynta cilmi-baaris ku saabsan isbeddellada dhowaanahan ku saabsan warbaahinta sheekeysiga dheer, waxay jeceshahay inay safarto oo ay wax ka barato dhaqamada kale.